Warka SAMSUNG: Daahfurka, Taleefoonada, Kiniiniyada iyo Waxbadan - Androidsis | Androidsis (Bogga 7)
Tilmaamaha ugu horreeya ee Galaxy J7 2018 ayaa la muujiyay
Waxaa la soo saaray qeexitaannadii ugu horreeyay ee Galaxy J7 2018 Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka cusub ee Samsung ee suuqa soo gali doona toddobaadyada soo socda.
Galaxy A6 iyo Galaxy A6 + ayaa ka muuqda Geekbench
Waxaan ku tusineynaa jaangooyooyinkii ugu horreeyay ee lagu faafiyey bogga Geekbench ee waxa ay noqon karaan Galaxy A6 iyo Galaxy A6 +
Nooca 256 GB ee Galaxy S9 iyo S9 + wuxuu imaan doonaa Spain 1da Abriil
Shirkadda reer Kuuriya ee Samsung ayaa xaqiijisay inay bisha Abriil soo bandhigi doonto nooc ka mid ah keydka 256 GB ee Galaxy S9 iyo Galaxy S9 + ee dalka Spain.
Samsung waxay ka tagtay fikradda ah in lagu hirgeliyo aaladda sawirka shaashadda shaashadda hoosteeda
Wax walba waxay u muuqdaan inay muujinayaan in shirkadda Kuuriya ee Samsung aysan qorsheyneynin inay hirgeliso dareeraha faraha ee shaashadda hoostiisa, gebi ahaanba ka tagaya tikniyoolajiyadan, sida Apple.
Samsung Galaxy S9 sidoo kale wuxuu yeelan doonaa nooca Microsoft Edition
Shirkadda Kuuriyaanka ah ee Samsung iyo Microsoft ayaa mar kale wada gaadhay heshiis ay ku bixinayso Galaxy S9 iyo Galaxy S9 + oo ku jira Microsoft Store oo ah daabacaad gaar ah oo Microsoft Edition ah, halkaas oo aannu ka helayno barnaamijyada waaweyn ee Microsoft oo hore loo sii rakibay.
Galaxy S9 + wuxuu 4 ka helaa 10kiiba ragga ka socda iFixit
Samsung waligeed laguma sifeynin inay siiso dayactir fudud oo boosteejooyinkeeda ah iyo Galaxy S9 + waxaan aragnaa inay sii wado dejinta isla isbeddellada.
Kuwani waa ogeysiisyadii ugu horreeyay ee TV-ga ee cusub ee Galaxy S9 iyo S9 +
Shirkadda reer Kuuriya ee Samsung ayaa dhowaan daabacday xayeysiisyadii ugu horreeyay ee telefishanka Kuuriya oo muujinaya hawlgalka astaamaha ugu muhiimsan ee calanka cusub ee shirkadda Kuuriya.
Samsung waxay iibsatay bilowga AI si loo hagaajiyo Bixby
Shirkadda Kuuriya waxay si rasmi ah u xaqiijisay inay iibsatay dhammaadkii sanadkii hore shirkadda Kngine, oo ah billowga Sirdoonka Artifishalka si loo hagaajiyo Bixby
Shaashadda ka sokow, Galaxy S9 Plus sidoo kale wuxuu leeyahay kaamiradii ugu fiicnayd abid
Sidii la filaayay, Galaxy S9 Plus iyo labadiisa kamaradood waxay noqdeen kuwa ugu fiican suuqa hada laga heli karo taleefan casri ah.
Sida laga soo xigtay DisplayMate, shaashadda Galaxy S9 ayaa ugu fiican suuqa
Sida laga soo xigtay shirkadda DisplayMate, oo mas'uul ka ah falanqaynta dhammaan shaashadaha, nooc kasta ha ahaadee, ee gaadha suuqa, Galaxy S9 ayaa ugu fiican suuqa maanta, oo ka sarreeya kii iPhone X, oo illaa hadda ahaa kan ugu fiican. .
Samsung waxay rukhsad u leedahay nashqadaha saddex taleefannada casriga ah ee mustaqbalka
Samsung waxay shatiyadeysay seddex naqshadood oo casriga ah ee mustaqbalka. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan shatiyadan sumadda Kuuriya oo soo jiitay dareen badan.
Samsung waxay ka saari kartaa taxanaha 'S' ee dhaxalka Galaxy S9
Sida laga soo xigtay wareysiyada lala yeeshay DJ Koh, magaca dhaxalka Galaxy S9 wuxuu noqon karaa kii ugu dambeeyay ee taxanaha Samsung S.
U ballanso Samsung Galaxy S9 hadda Amazon oo hel qiimo dhimis ah illaa 376 euro. Waxaan sharaxeynaa sida loo helo
U keydi Samsung Galaxy S9 ama S9 Plus cusub Amazon hadda kuna qaado qiimo dhimis dhan to 376 qiimaha rasmiga ah.
Samsung ayaa durba soo dhigtay kanaalkeeda YouTube-ka muuqaalkii ugu horreeyay ee ay ku cusub tahay shirkadda cusub ee loo yaqaan 'Galaxy S9', oo ah terminal ku dhufta suuqa si ay ugu xaaqdo inta kale ee casriga ah kamaradaha, taas oo ay ugu wacan tahay santuuqa isku-dhafan ee isku-dhafan.
Samsung Renove: nidaamka dhimista ee Galaxy S9
Samsung Renove: nidaamka dhimista ee Galaxy S9. Waxbadan ka ogow barnaamijkan dhimista ee soconaya illaa 25-ka Maarso.
Galaxy S9 iyo S9 + waxay taageeraan kaararka microSD ilaa 400GB
Meesha ugu badan ee keydinta ee laga heli karo kaararka microSD ee Galaxy S9 waa 400 GB, in ka badan meel ku filan oo lagu daboolo baahi kasta.
Samsung Galaxy S9 hadda waa rasmi, dhammaan qeexitaannada iyo astaamaha cusub ee Samsung
Kadib ku dhowaad hal sano oo xan ah, waxaan ugu dambeyntii ka takhalusnay shaki oo waxaan horeyba u ogaanay waxa ay yihiin dhammaan astaamaha iyo qeexitaannada cusub ee Samsung: Galaxy S9
Fiidiyowgii ugu horreeyay ee Samsung Galaxy S9 iyo S9 + si sir ah ayaa loo dusiyay
Halkan waxaan kaaga tagnay fiidiyowgii ugu horreeyay ee Samsung Galaxy S9 iyo S9 + oo si khalad ah uga dillaacay bogga rasmiga ah ee Samsung. Fiidiyow aan hadda laga heli karin kanaalkiisa rasmiga ah laakiin ku jira Androidsis ayaan kuu haynaa adiga.
Maya, qiimaha Galaxy S9 kama badnaan doono 1.000 euro
Mar labaad Evan Blass ayaa siidaayay sicirka ay calaamadaha cusub ee Samsung, Galaxy S9 iyo Galaxy S9 + suuqa u gali doonaan.
Waxaa la xaqiijiyay in Galaxy S9 + uu ku imaan karo 256 GB oo keyd ah
Xanta ugu dambeysa ee la xiriirta Galaxy S9 waxay ina tusaysaa sida terminalkani ugu gaari karo suuqa nooc 256 GB ah, ugu yaraan suuqyada qaarkood.
Maarso 16 waxay noqon kartaa taariikhda aan ku heli karno Samsung Galaxy S9
Sida ku xusan daabacaad ay soo saartay shirkadda South Korea ee Samsung, Galaxy S9 oo aan arki doonno 25-ka Febraayo kulanka Mobile World Congress ee Barcelona, ​​ayaa laga heli karaa adduunka laga bilaabo Maarso 16. Intaas waxaa sii dheer, macluumaad kale oo aan hoosta kuugu sheegi doono ayaa sidoo kale naloo muujiyey.
Samsung Galaxy S9 + wuxuu ku dhaliyay Geekbench Exynos 9810, layaabna wuu ka awood badan yahay kan SD845!
Samsung Galaxy S9 + wuxuu soo maray bartilmaameedyo Geekbench ah, mid ka mid ah astaamaha lagu kalsoonaan karo ee lala barbar dhigo AnTuTu. Sida laga soo xigtay Geekbench, Galaxy S9 + oo leh Samsung's Exynos 9810 ayaa ka dhaqso badan kana awood badan kan Qualcomm Snapdragon 845. Ogow!
Kuwani waa qeexitaannada xaday ee kiniinka Samsung Galaxy Tab S4
Fiiri dhammaan waxyaabaha xaday ee Samsung Galaxy Tab S4, kaniiniga beddelaya Galaxy Tab S3. Sida laga soo xigtay xogta la siiyay, qalabkani wuxuu la socdaa sideed-processor processor, shaashad weyn oo 10.5-inji ah, iyo Android 8.0 Oreo, iyo waxyaabo kale oo badan.
Baro laxanka cusub ee mobilada Samsung ee 2018
Samsung waxay soo bandhigeysaa laxanka cusub ee mobiladaada sanadka 2018. Soo ogow nooca cusub ee 'over The Horizon' oo ay summaddu ka bilaabeyso suuqa sanadkan.
Qiimaha Galaxy S9 iyo S9 + waa la sifeeyaa markale
Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan faahfaahinta qiimaha suurtagalka ah ee Galaxy S9 iyo S9 +
Qeexitaanno kala duwan oo ka tirsan Samsung Galaxy J4 ayaa ku daatay GeekBench
Samsung Galaxy J4 ayaa goor dhaweyd ku dusay bartilmaameedka GeekBench oo ay weheliyaan qaar ka mid ah qeexitaankiisa oo dhigaya inuu yahay meel dhexaad ah oo leh faa'iidooyin dhexdhexaad ah. Soo ogow!
Fiidiyowyadii ugu horreeyay ee rasmi ah ee Galaxy S9 ayaa halkan yaal
Samsung waxay daabacdaa fiidiyowyadii ugu horreeyay ee rasmi ah ee Galaxy S9. Ka raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan fiidiyowyadan ku saabsan taleefanka sare ee dhammaadka leh sumadda Kuuriya.
Galaxy S9 wuxuu lahaan doonaa dhawaaq dhawaaq ah iyo Animojis
Labada astaamood ee cusub ee wax waliba u muuqdaan inay muujinayaan in Galaxy S9 iyo S9 + ay bilaabi doonaan waa emojis firfircoon iyo nidaam ku hadla codka maqalka.
Halbeegga ugu horreeya ee Galaxy S9 oo leh 6 GB oo RAM ah ayaa la sifeeyey
Halbeegga ugu horreeya ee Galaxy S9, wuxuu ina tusayaa processor-ka Qualcomm ee Snapdragon 845, oo leh natiijooyin aad uga badan kii ka horreeyay.
Sawirada ugu horreeya ee Samsung DeX ee Galaxy S9 waa la sifeeyey
Mar labaad iyo sidii caadiga ahayd, maalmo ka hor soo bandhigida jiilka cusub ee Galaxy S9, Evan Blass ayaa siidaayay sida jiilka cusub ee Samsung DeX uu noqon doono
Samsung waxay si rasmi ah u bilawday Android Oreo oo loogu talagalay Galaxy S8 iyo S8 +
Kadib sugitaan ka badan lix bilood, Galaxy S8 iyo S8 + ayaa ugu dambeyntii bilaabay inay helaan nambarkii ugu dambeeyay ee Android Oreo
Sawirada cusub ee Galaxy S9 iyo Galaxy S9 +
Evan Blass, ayaa ku daabacay bartiisa Twitter-ka, sawirro cusub oo muujinaya waxa noqon doona calanka Samsung ee soo socda, Galaxy S9 iyo S9 +, oo ah terminal si rasmi ah loogu soo bandhigi doono 25-ka Febraayo xarunta MWC.
Kuwani waa Samsung Galaxy oo heli doona Android Oreo sida ku cad xog cusub
Baro wax ku saabsan daadadkii ugu dambeeyay ee noo sheegaya nooca Samsung ay heli doonaan cusbooneysiinta Android Oreo inta lagu gudajiro sanadkan 2018.
Qualcomm iyo Samsung waxay xoojiyeen xiriirkooda heshiis cusub
Qualcomm iyo Samsung waxay xireen heshiis iskaashi cusub. Waxbadan ka ogow heshiiska cusub ee labada shirkadood horey u xidheen.
Ugu dambeyntii VLC beta waxay bixisaa taageero Samsung DeX
Cusboonaysiinta xigta ee codsiga VLC waxay na siin doontaa taageero ku-xirnaanta Samsung DeX oo aan ugu rogi karno S8, S8 + ama Note 8 kombuyuutar isticmaalka.
Isticmaalayaasha barnaamijka beta 8.0 Android ee loogu talagalay Galaxy S8 way cusbooneysiin doonaan kahor qof kasta
Isticmaalayaasha Galaxy S8 ee qayb ka ahaa barnaamijka beta 8 Android waxay awoodi doonaan inay ku raaxaystaan ​​hal maalin kahor dhammaan isticmaalayaasha Android Oreo
Samsung Pay hadda si rasmi ah ayaa looga heli karaa Mexico
Samsung ayaa hadda si rasmi ah u daah-furtay nidaamkeeda lacag-bixinta wireless-ka iyada oo loo marayo taleefannada casriga ah ama smartwatch ee Mexico, ka dib markii ay safarkooda billaabeen bishii November ee la soo dhaafay.
Galaxy S9 wuxuu awoodi doonaa inuu aqoonsado wajigaaga iyo iriska isla waqtigaas
Galaxy S9 wuxuu aqoonsan doonaa wajiga iyo iriska isla waqtigaas. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan astaamaha cusub ee taleefanka sumaddu ka mid noqon doono furitaanka telefoonka.
Soo qaado shaashadda cusub ee Galaxy S9 iyo S9 +
Haddii aad rabto inaad soo dejiso gidaarka cusub ee Galaxy S9, qormadan waxaan ku tusaynaa sida loo sameeyo hab fudud oo fudud.
Samsung Galaxy S9 waxaa la soo bandhigi doonaa Febraayo 25
Waa rasmi: Samsung Galaxy S9 waxaa la soo bandhigayaa Febraayo 25. Raadi wax badan oo ku saabsan taariikhda soo bandhigida ee dhamaadka-sare sare ee sumadda Kuuriya.
Samsung Galaxy Note 8 waxay horey u sii amartay inay ka bilaabato Sebtember 12 Hindiya
Boos celinta si loo helo Samsung Galaxy Note 8 cusub ayaa ka bilaaban doonta Talaadada soo socota, Sebtember 12 gudaha Hindiya qiime rikoor ah
Kani waa Galaxy J7 Plus, taleefanka casriga ah ee Samsung oo wata laba kamarad
Samsung Galaxy J7 Plus ayaa lagu soo bandhigay Thailand iyadoo leh 13MPx + 5Mpx dual camera iyo shaashad 5.5-inch ah. Waxaan soo bandhigeynaa qiimaheeda iyo qeexitaankiisa.
Samsung Dex Station, dareenka ugu horreeya
Dareenka ugu horreeya ee fiidiyowga ka dib isku dayga Samsung Dex Station, aalad u rogeysa qalabkaaga Galaxy S8, S8 + ama Galaxy Note 8 kombiyuutar
Dareenka ugu horreeya ee fiidiyowga iyo Isbaanishka kadib markii lagu tijaabiyay Samsung Galaxy Note 8 gudaha Samsung istaagga IFA 2017 ee lagu qabtay Berlin.
Dareenka ugu horreeya ka dib isku dayga Samsung Gear IconX, dhagaha Samsung-ga cusub ee wireless-ka leh oo leh naqshad gaar ah oo soo jiidasho leh
Dareenka ugu horreeya ka dib isku dayga Samsung Gear Sport, saacadda cusub ee Samsung ee isboortiga oo u taagan la socodka dhaqdhaqaaqa biyaha
LG V30 vs Samsung Galaxy Note 8 - Falanqaynta isbarbardhiga ah
Hadda oo LG V30 uu rasmi yahay, waxaan soo bandhigeynaa isbarbardhigga u dhexeeya Galaxy Note 8 iyo LG V30 si aad u ogaato waxyaabaha ugu waaweyn ee ay ku kala duwan yihiin.
Gear Sport, Gear Fit 2 Pro iyo Gear Icon X, saddexda Samsung ee cusub ee la gashado nolol raaxo leh oo caafimaad leh
Shirkadda South Korea Samsung ayaa cusbooneysiisay xariiqda qalabka la gashado iyadoo la bilaabay seddex alaab oo cusub: Gear IconX, Gear Sport, Gear Fit 2 Pro
Tijaabooyinku waxay muujinayaan in Galaxy Note 8 uu leeyahay shaashadda adduunka ugu fiican
Tijaabooyinkii ugu dambeeyay ee Ray Soneira ee DisplayMate waxay muujinayaan in shaashadda Galaxy Note 8 ay tahay tan adduunka ugu fiican.
Samsung Galaxy Note 8 iyo Samsung Galaxy Note 7
Hadda Samsung waxay ugu dambayntii si rasmi ah u shaacisay Galaxy Note 8 cusub, waxaan kuu soo bandhigeynaa miis isbarbardhig ah oo ku saabsan walxaha qarxa ee Galaxy Note 7
Samsung Galaxy Note 8 vs Taleefanka Muhiimka ah
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa shax isbarbardhig muuqaal ah oo dhameystiran oo wajahaya astaamaha ugu muhiimsan ee Galaxy Note 8 cusub iyo Telefoonka Muhiimka ah
Galaxy Note 8 horeyba waa run. Waxaa hada lagu soo bandhigay munaasabad gaar ah oo ka dhacday New York hadana waa waqtigii isbarbardhiga
Dhamaan faahfaahinta Samsung Galaxy Note 8 cusub
Ugu danbeyn. Samsung ayaa mar hore si rasmi ah u soo bandhigtay Galaxy Note 8 cusub, waana tan xaashi farsamo oo dhameystiran
Samsung waxay u soo bandhigi doontaa dhammaan isticmaaleyaasha iibsada Galaxy Note 8 horay u sii wata xirmooyin wata hadiyado qaas ah.
Samsung ayaa bilaabi doonta nooc laba-SIM ah oo ah Galaxy Note 8 Yurub
Galaxy Note 8 Dual-SIM wuxuu imaan doonaa Yurub oo uu weheliyo nooca caadiga ah ee boosteejada, inkasta oo ay kaliya lahaan laheyd saxaarad isku dhafan, oo loogu talagalay SIM iyo microSD.
Kani waa trailerkii ugu horreeyay ee Samsung Galaxy Note 8
Tilmaamihii ugu horreeyay ee rasmi ah ee Samsung Galaxy Note 8 ayaa xaday, calanka xiga ee soo saaraha Kuuriya oo yeelan doona shaashad 6.3-inji ah
Hoggaaminta Samsung 8 dib-u-eegis mise mustaqbal?
Hogaaminta 8, Samsung oo u heellan fikrad casri ah oo soo jiidaneysa waagii hore laakiin leh tiknoolajiyadda ugu badan
Kuwani waa qeexitaannada ugu dambeeya ee Samsung Galaxy Note 8
Waxaan soo bandhigeynaa qeexitaannadii farsamo ee ugu dambeeyay ee Samsung Galaxy Note 8 ee la soo daadiyay ka hor inta aan si rasmi ah loo bilaabin falka.
Internetka mobilada ayaa ka dhaqso badan isku xirnaanta fiilooyinka, mahad Samsung
Fiber optic internet ayaa loo tixgeliyaa inuu yahay kan ugu dhaqsaha badan, laakiin modem Samsung cusub ayaa awood u leh xawaare sare.
Kuwani waxay noqon karaan Galaxy Note 8 qaababka kamaradaha labada ah iyo shaqooyinka
Samsung ayaa ku daabacday boggeeda qaar ka mid ah qaababka iyo astaamaha kamaradaha laba-geesoodka ah ee la imaan kara taleefanka cusub ee Galaxy Note 8 iyo taleefannada kale ee casriga ah.
Samsung Galaxy Note 8 Waxay Heshaa Shahaadada FCC
Samsung Galaxy Note 8 ayaa horey u heshay ogolaanshaha FCC waxayna ku dhowdahay in lasoo bandhigo Ogosto 23.
Shaandheeyay sawirradii ugu horreeyay ee Samsung Galaxy S8 Firfircoon
Sawiradii ugu horreeyay ee dhabta ah ee Samsung Galaxy S8 Active, oo ah taleefan cusub oo laga soo saaray soo saaraha Kuuriya oo wata shahaado milatari, ayaa la dusiyay
Iyadoo loo marayo Wifi Alliance waxaan awoodnay inaan aragno nooc ka mid ah Galaxy J7 2016 oo ku shaqeynaya Android 7.0 N sidaa darteed cusbooneysiintu way sii dhaceysaa
Samsung Galaxy Note 8 ayaa si rasmi ah u soo bixi doonta Ogosto 23
Shirkadda Koonfurta Kuuriya ee Samsun waxay casuumaad u dirtaa soo bandhigga rasmiga ah ee Galaxy Note 8 Ogosto 23 oo ka socota New York
Sawir cusub oo Samsung Galaxy Note 8 ah ayaa kadis ku noqday qaabkiisa
Sawirro saxaafadeed ayaa la daadiyay oo muujinaya naqshadda Samsung Galaxy Note 8, taasoo xaqiijinaysa faahfaahinta qaar sida kamaraddeeda laba-laabma
Kuwaani waxay noqon doonaan shaqooyinka cusub ee kamaradda Galaxy Note 8 ay ku soo dari doonto
Hawlaha cusub ee kamaradda Samsung Galaxy Note 8 ay ku soo dari doonto ayaa la sifeeyey, iyagoo iftiiminaya qaabka Dareenka Qoto dheer
Samsung Galaxy waxay horey u ogolaatay furitaanka kumbuyuutarrada Windows 10 mahadsanid Samsung Flow
Ma ka daashay furitaanka kombuyuutarkaaga lambar sir ah? Samsung waxay kuu keeneysaa xalka Samsung Flow, ku fur kumbuyuutarkaaga kaliya mobilkaaga.
Laga soo bilaabo gacanta Samsung ayaa timid Spain, DeX Dock oo Galaxy S8-gaaga u rogeysa kombiyuutar
Laga soo bilaabo gacanta Samsung, iswaafajinta udhaxeysa aaladaha Samsung S8 iyo S8 + ayaa hada macquul ah mahadaasna waxaa leh DeX Dock, oo nolosheena u fududeyn doonta.
Tani waxay noqon doontaa qiimaha Samsung Galaxy Note 7 Fan Edition
Maalmo yar uun ka dib markii lagu bilaabay Kuuriyada Koonfureed, qiimaha Galaxy Note 7 Fan Edition ayaa horay loo soo saaray iyada oo ay weheliso la yaab kale
Waa rasmi: Galaxy Note Fan Edition wuxuu imaan doonaa July 7
Boostada xayeysiinta ee Kuuriyada Koonfureed waxay xaqiijineysaa soo saarista Galaxy Note Fan Edition ama Galaxy Note 7 oo dib loo cusbooneysiiyay 7-da Luulyo
Waa halkan, Samsung Galaxy S8 + Dual Sim horeyba waxaa loogu iibiyaa Yurub
Iibinta Samsung Galaxy S8 + Dual SIM ayaa hadda laga heli karaa Yurub, kii ugu horreeyay ee hela wuxuu ahaa Boqortooyada Ingiriiska, hadda waxaa laga bilaabi doonaa Jarmalka iyo Netherlands.
Samsung waxay soo saartay Galaxy S8 Plus oo casaan ah
Samsung waxay soo saareysaa nooc casaan casri ah oo loo yaqaan 'Galaxy S8 Plus' oo loo yaqaan 'Rose Pink', oo hadda gaar u ah Taiwan iyo muddo xaddidan
Samsung ayaa soo saartay Galaxy Tab S3 gudaha Hindiya
Hindiya waxay sii wadaa inay ahaato mid mowduuc leh, iyo sidoo kale shirkadda Koonfurta Kuuriya ee Samsung, taas oo, sidii shirkado badan oo tikniyoolajiyad ah kadib (Apple, ...
Samsung Galaxy Note 8 waxaa lagu soo bandhigi doonaa Ogosto 26 magaalada New York
Macluumaadkii ugu dambeeyay ee nooga imanaya Kuuriya wuxuu tilmaamayaa Ogosto 26 oo ah taariikhda rasmiga ah ee soo bandhigida Galaxy Note 8, wax yar uun ka hor IFA 2017.
Samsung Galaxy Note 8 "Emperor Edition" wuxuu yeelan doonaa 8GB oo RAM ah
Galaxy Note 8 wuxuu lahaan doonaa daabacaad gaar ah oo loo yaqaan "Emperor Edition" oo leh 8GB RAM oo lagu iibin doono kaliya suuqa Aasiya.
Samsung waxay soo bandhigeysaa Galaxy J7 Max cusub iyo J7 Pro oo ay lajirto Samsung Pay ee Hindiya
Faahfaahinta farsamada, qiimaha iyo faa'iidooyinka Samsung Galaxy J7 Max cusub iyo Galaxy J7 Pro, ayaa toddobaadkan laga bilaabay Hindiya.
Galaxy Note 8 wuxuu noqon lahaa taleefankii ugu horreeyay ee Snapdragon 836 leh
Samsung waxay ku dari kartaa processor-ka cusub ee Qualcomm, oo loo yaqaan 'Snapdragon 836', oo ku saabsan calankiisa cusub, ee Galaxy Note 8, oo lagu wado inuu dhowaan soo baxo.
Samsung Galaxy Note 8 waxaa la soo bandhigi doonaa bisha Ogosto iyada oo shaashad aan lahayn bireello
Sida ku cad faahfaahinta cusub, Galaxy Note 8 waxaa soo bandhigi doona Samsung maalmo yar kahor IFA Berlin si looga faa iideysto xoogaa iPhone 8.
Qiimaha iyo qeexitaanka Samsung Galaxy J3 cusub, Galaxy J5 iyo Galaxy J7 (2017)
Kala duwanaanta 'Galaxy J' waxaa lagu cusbooneysiiyay moodallo cusub. Waxaan daaha ka qaadaynaa qiimaha iyo qeexitaanka Galaxy J3, Galaxy J5 iyo Galaxy J7 ee 2017.
Samsung iyo LG waxay bilaabayaan noocyo cusub oo Galaxy S8 iyo G6 ah si ay ula tartamaan iPhone 8
Samsung iyo LG ayaa soo saari doona moodallo cusub oo Galaxy S8 iyo G6 ah si ay ula jaan qaadaan soo-saarista taleefannada iPhone 8, oo loo qorsheeyay bisha Sebtember ee sannadkan.
Samsung waxay soo saareysaa daabacaad gaar ah oo ah Galaxy S8 oo ay dhiirrigelisay burcad-badeedda cusub ee filimka Caribbean-ka oo lagu soo bandhigay sanduuq qaali ah
Galaxy S8 Plus oo leh 6 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo keyd ah ayaa yimid Hindiya
Samsung ayaa soo saartay nooc cusub oo ah nooca casriga ah ee Galaxy S8 Plus oo leh 6 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo keyd ah oo kaliya laga iibin jiray Shiinaha iyo Koonfurta Kuuriya.
Samsung Galaxy J5 2017 ayaa laga iibin doonaa Yurub 22-ka Juun
Sida laga soo xigtay dukaan Jarmal ah oo daabacay faahfaahinta Galaxy J5 2017, casriga cusub ee Samsung ayaa laga iibin doonaa Yurub 22-ka Juun.
Galaxy C10 ayaa noqon doona mobiladii ugu horeeyey ee Samsung oo leh laba kamarad
In kasta oo loo malaynayay in Galaxy Note 8 uu noqon doono mobiilkii ugu horreeyay ee Samsung ah oo leh laba kamaradood oo gadaal ah, waxay u muuqataa in Galaxy C10 uu hore ugu soo bixi doono nidaamkan.
Samsung ayaa soo saaraysa barnaamijka 'Galaxy J3 Pro' ee dalka Hindiya oo wata nooca loo yaqaan 'Android' oo laga keenay laba sano ka hor
Samsung ayaa soo saartay taleefanka casriga ah ee loo yaqaan 'Galaxy J3 Pro' ee gudaha Hindiya oo leh Android 5.1 Lollipop, oo ah nidaam hore u jiray in ka badan 2 sano.
Buugga isticmaalaha ee Ruushka ayaa xaqiijinaya astaamaha Samsung Galaxy J5 2017 iyo J7 2017
Buug gacmeed Ruush ah oo daadanaya oo xaqiijinaya astaamaha sirta ah ee soo socda ee Samsung Galaxy J5 (2017) iyo Galaxy J7 (2017) casriga ah
Samsung Galaxy S9 waxaa loo yaqaan "Star"
Samsung waxay durbaba diyaarinaysaa calankeeda soo socota, Galaxy S9, oo loo qorsheeyay sanadka 2018. Intaa waxaa dheer, shirkaddu waxay ugu yeertaa moobilkeeda cusub "Star".
Samsung ayaa dhawaan soo bandhigi doonta shaashadaheeda cusub ee laastikada ah
Kahor intaadan baran taleefannada casriga ah ee leh shaashad jilicsan, waxay umuuqataa inaan ku arki karno taleefannada casriga ah shaashadda laastikada ah suuqa.
Samsung Galaxy J5 (2017): Astaamaha farsamada iyo turjumaadaha rasmiga ah
Galaxy J5 (2017) waa taleefan casri ah oo dhexdhexaad ah oo leh kamarad 13 MPx ah iyo Exynos 7870 8-core SoC. Waxay dhawaan ka soo muuqan doontaa Yurub iyadoo qiimihiisu yahay 279 euro.
Galaxy Note 8 wuxuu ku imaan lahaa shaashad dhan 6.3 inji iyo labo kamarad gadaal ah
Sida ku cad xogaha ugu dambeeyay, Samsung Galaxy Note 8 wuxuu soo bandhigi doonaa shaashad 6.3-inch ah oo leh 18.5: 9 saamiga dhinac iyo kamarad gadaal leh.
Kaamirada Galaxy S8 wali kama garaacdo Google Pixel-ka DxOMark
Google Pixel wali waa moobaylka leh kamarada ugu fiican suuqa, sida ku cad tijaabooyinkii ugu dambeeyay ee DxOMark, halka kaalinta labaad uu yahay Galaxy S8
Qeexitaanka Samsung Galaxy J7 Max, oo ah taleefan casri ah oo la awoodi karo 5.7 inji ayaa xaday
Waxaan horey u ogaanay astaamaha farsamada iyo mudadii la bilaabay Samsung Galaxy J7 Max, oo ah mobiil dhexdhexaad ah oo leh shaashad 5.7 inji ah
Sida loo isticmaalo tilmaam ku saabsan akhristaha faraha ee Galaxy S8
Casharkaan gaaban waxaan ku baran doonaa sida loo xoojiyo loona isticmaalo tilmaamaha akhristaha faraha ee Samsung Galaxy S8.
Ma ogtahay inta ay cusbooneysiin doonto Galaxy Note 7?
Miyaad horeyba u ogtahay inta ay le'eg tahay qaabka dib loo cusboonaysiiyay ee muranka dhaliyay 7? Waxay noqon doontaa ku dhowaad $ 400, qiimo ka badan qiimaha xiisaha leh.
Sidee adag yahay Galaxy S8 cusub?
Ka hor intaadan maalgashi muhiim ah ku sameyn casriga casriga ah, waxaa haboon inaad ogaato sida ay ugu adkeysato xaaladaha qaarkood.
McAfee antivirus ayaa horey loogu sii rakibi doonaa dhamaan Samsung Galaxy S8
McAfee VirusScan waa barnaamij antivirus ah oo laguugu rakibi doono si caadi ah dhamaan aaladaha kala duwan ee Samsung Galaxy S8.
Qiimaha Galaxy S8 ayaa ku dhacay hoos u dhaca Kuuriyada Koonfureed sababo la xiriira qiimo dhimis sharci darro ah
Dukaamada internetka iyo dukaamada tafaariiqda ee Kuuriyada Koonfureed waxay bixiyaan qiimo dhimis sharci darro ah iyo lacag celin loogu talagalay iibsashada Galaxy S8 si loo soo jiito macaamiil cusub
Dayactirka Galaxy Note 7 ayaa ka muuqda jaangooyooyin ay la socdaan processor Exynos 8890 iyo 8895
Galaxy Note 7 Refurbished ayaa dhowaan soo martay tijaabada Geekbench oo ku saabsan noocyada Exynos 8890 iyo Exynos 8895 oo ah processor-rada.
Galaxy S7 wuxuu noqonayaa taleefanka gacanta ee ugu isticmaalka badan Samsung adduunka
Samsung Galaxy S7 wuxuu noqday taleefannada casriga ah ee loogu isticmaalka badan yahay adduunka ee shirkadda laga bilaabo Abriil 2017.
Galaxy J7 2016, tani waa ikhtiyaarka ugu fiican haddii aad raadineyso inaad iibsato Samsung raqiis ah
Haddii aad raadineyso Samsung raqiis ah, ha ka waaban. Samsung Galaxy J7 2016 wuxuu ku kacayaa wax ka yar 250 euro. Tani waa falanqaynteena ka dib laba toddobaad oo isticmaalka ah
Samsung Galaxy Folder 2 wuxuu maraa tijaabada FCC
Samsung Galaxy Folder 2, waa labo SIM terminal oo leh dabool, dhawaanahan waxaa la marsiiyay tijaabada FCC si loogu iibgeeyo Mareykanka.
Fagaarayaasha Samsung oo ay ka buuxeen cabashooyin ku saabsanaa nasiib daro iyo reboots kadis ah Galaxy S8
Sida muuqata cutubyada qaar ka mid ah Samsung Galaxy S8 ayaa si kadis ah oo lama filaan ah dib ugu bilaaba dhowr jeer maalintii sabab la'aan.
Fikraddan mustaqbal ee Galaxy Note 8 waxay dhexgashaa tan ugu wanaagsan Galaxy S8
Galaxy Note 8 wuxuu bilaaban doonaa agagaarka IFA 2017, laakiin ilaa waqtigaas fikradda mustaqbalku waxay dooneysaa inay na siiso fikrad ku saabsan sida naqshadeeda ugu dambeysa noqon doonto.
Samsung iyo LG waxay diyaarsadaan shaashado afarta gees leh
Samsung iyo LG waxay ka shaqeynayaan sameynta bandhigyo aan yareyn oo leh afarta gees ee qalooca ee loogu talagalay calankooda soo socda, Galaxy S9 iyo LG G7.
Sifooyinka Samsung Galaxy J3 (2017) waa la sifeeyey
Samsung Galaxy J3 (2017) wuxuu noqon doonaa casriga cusub ee casriga ah ee shirkadda South Korea, oo leh 2GB RAM, processor Exynos 7570 iyo 12 MPx camera.
Samsung iyo Qualcomm waxay bilaabayaan diyaarinta processor-ka loogu talagalay Galaxy S9
Processor-ka Snapdragon 845 horeyba waxaa u soo saaray Samsung iyo Qualcomm waxaana loo isticmaali doonaa Samsung Galaxy S9 ee soo socota horaanta 2018.
Dayactirka Galaxy Note 7 horeyba waa loo xaqiijiyay Wi-Fi
Samsung waxay kusii socotaa qorshaheeda ah inay iibiso unugyada la dayac tiray ee Galaxy Note 7 oo xanuunsan, horeyna waa loo xaqiijiyay WiFi
Dib u eegista Samsung Galaxy S8: Qurux saafi ah, laakiin leh cilado
Ha moogaan dib u eegista Galaxy S8 ee aan ku tijaabinay sifooyinka mobilada cusub ee Samsung. Mudan? Sideed ku horumarin kartaa? Soo ogow!
Samsung Galaxy Note 8 ayaa laga yaabaa inuu ku soo bilowdo IFA 2017 si uu ula tartamo iPhone 8
Madaxa IFA Berlin wuxuu yiri dhacdadan Sebtember waxay noqon doontaa goobta ugu haboon ee lagu soo bandhigi karo Samsung Galaxy Note 8.
Sida loo galo Download mode on Samsung Galaxy S8
Cashar fudud oo leh sharaxaad talaabo-tallaabo ah si aad ugu kiciso Galaxy S8 iyo S8 Plus qaabka Download adigoo riixaya badhanno dhowr ah.
Google Play Music wuxuu keenaa shaqooyin gaar ah Galaxy S8
Dhamaan taleefannada Samsung iyo kiniiniyada waxay u isticmaali doonaan Google Play Music wixii hadda ka dambeeya sidii muusigga asalka u ah, iyo shaqooyinka gaarka ah.
Sida loo hagaajiyo Samsung Galaxy S8 iyo S8 Plus dhibaatada shaashadda cas
Waxaan kuu sharaxeynaa sababta dhibaatada shaashada guduudan ee Samsung Galaxy S8 iyo waliba xalka qosolka ee Samsung na siiso.
Qaar ka mid ah Galaxy S8 iyo S8 + waxaa saameeya midab casaan ah oo shaashadda ah
Qaar ka mid ah iibsadayaashii hore ee Galaxy S8 iyo S8 + waxay la kulmeen bandhigyo cas-cas leh sababo la xiriira isu-hagaajinta midabka oo liitay.
Samsung waxay tirtiraysaa suurtagalnimada in lagu celiyo badhanka Bixby ee Galaxy S8 iyada oo la cusbooneysiinayo
Badhanka Bixby ma awoodi doono in lagu soo daro Galaxy S8 iyo S8 + cusub sababtoo ah cusbooneysiintii ugu dambeysay ee OTA ee Samsung, taas oo baabi'inaysa suurtagalnimada.
Samsung ayaa soo saartay 3 waji ama wajiyo cusub oo saacad cusub ah oo loogu talagalay aaladda 'Gear S3 smartwatch', oo diiradda lagu saaray isboortiga, safarka iyo safarada miyiga ama buuraha.
Dib-u-celinta Gaadiidka, waa barnaamij kaa ilaalin doona halista SMS-ga marka aad ka dambeyso giraangirta
Samsung ayaa soo saartay barnaamij loo yaqaan 'In-Traffic Replay' oo kaa ilaalin doona inta aad gadaal ka riixeyso adoo daminaya ogeysiisyada iyo maaraynta SMS-kaaga.
Telefoonada isku laaban ee Samsung Galaxy X ayaa la soo bandhigi doonaa sanadkan iyada oo leh laba shaashadood oo OLED ah
In kasta oo helitaanka ganacsi ee taleefannada isku laaban la saadaalin karo oo keliya sanadka 2019, waxay umuuqataa in Samsung ay diyaarinayso ...
Mid ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan ee Galaxy S8 lama heli doono bilowgeeda
Kaaliyaha dalwaddii ah Bixby wuxuu la bilaabi doonaa Galaxy S8 iyada oo aan la taageerin xakamaynta iyo cod raadinta, sida lagu sheegay ogeysiis ka soo baxay Samsung.
Samsung Galaxy Xcover 4 wuxuu imaan doonaa Yurub 24-ka Abriil
Samsung Galaxy Xcover 4, oo ah taleefan casri ah oo qafiif ah isla markaana leh difaac MIL-STD 810G, ayaa iman doona Yurub bishaan Abriil. Waxaan muujineynaa qiimaha iyo sifooyinka.
Sawirradii ugu horreeyay ee Galaxy Note 7 oo dib loo hagaajiyay ayaa soo muuqda
Laga soo bilaabo dalka Vietnam, sawirradii ugu horreeyay ee Samsung ah oo la cusbooneysiiyay Galaxy Note 7 ayaa daadanaya, kuwaas oo shirkaddu ay bilaabi doonto inay waxyar iibiso
Tijaabada xawaaraha: Galaxy S8 vs iPhone 7 Plus
Galaxy S8 iyo iPhone 7 Plus ayaa wajahay tijaabo xawaare ah si loo arko midka ugu dhaqsaha badan. Natiijooyinka ayaa kaa yaabi doona.
Imtixaanka dulqaadka: Samsung Galaxy S8 vs iPhone 7 Red
Galaxy S8 iyo iPhone 7 waxaa lagu sameeyay tijaabooyin dhibic fudud ah. Labada qalabba waxaa looga tagay shaashad jaban.
Casharro fiidiyow ah oo wax ku ool ah si aad uhesho soo kabashada wax ka beddelka tooska ah iyo xididka Samsung Galaxy S6 Edge Plus oo leh rasmi ah Android Nougat.
Samsung Galaxy S8 waa taleefanka casriga ah ee leh shaashadda ugu fiican adduunka, sida laga soo xigtay DisplayMate
Shirkadda DisplayMate ayaa Samsung Galaxy S8 ugu magacdartay taleefanka casriga ah shaashadda ugu fiican adduunka ka dib baadhitaan ballaadhan.
Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S6 Edge Plus si rasmi ah Android 7.0 adoo adeegsanaya Odin talaabo talaabo ah
Halkan waxaad ku leedahay cashar tallaabo-tallaabo ah oo ku saabsan sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S6 Edge Plus ee rasmiga ah ee Android 7.0 adoo adeegsanaya Odin oo aanad soo dhigin miiska Knox.
Sida Samsung loogu beddelo Samsung Galaxy S8. Iyadoo Bixby shaqeyneyso !!
Halkan waxaa ah cashar fudud oo fiidiyow ah oo loogu talagalay dadka isticmaala Samsung ee doonaya inay Samsung u beddelaan Samsung Galaxy S8, iyo Bixby oo firfircoon
Samsung Galaxy S8 cusubi ma taageerayo Google Daydream
Samsung Galaxy S8s-ka cusubi lama jaanqaadi karaan Google Daydream, in kasta oo ay ku filan tahay in la beddelo xariiqda koodhka si loo sameeyo
Cilad cusub oo leh qalab Samsung ah, markale?
Markii ay u muuqatay in biyaha Samsung ay mar kale xasilloon yihiin, fiidiyoow ayaa ka soo baxaya internetka kaas oo ay ku jees jeesayaan aqoonsiga wajiga sawir
Waxaad hadda soo dejisan kartaa waraaqaha asalka ah ee Galaxy S8
Wargeysyada Samsung Galaxy S8 ayaa hadda la heli karaa, iyadoo wadar ahaan 16 taariikhood oo kala duwan lagu xallinayo ugu badnaan
Samsung Galaxy S8 vs iPhone 7: Apple wuxuu leeyahay mid aad u adag
Falanqeyn isbarbardhig ah Samsung Galaxy S8 iyo iPhone 7, oo leh qeexitaano, qiimayaal, waxyaabo muhiim ah, iyo kala duwanaansho weyn iyo isku ekaansho.
"100.000 oo unug oo Samsung Galaxy S8 ah oo bilaash ah". Waxaan kuu sheegeynaa sida looga qaybqaato dhiirrigelinta gardarrada badan ee Samsung
100.000 oo unug oo Samsung Galaxy S8 ah oo bilaash ah, waxaan kuu sheegeynaa waxkastoo ku saabsan dhiirrigelintan ugu dambeysay uguna gardarrada badneyd ee abid lagu arko soo bandhigida Android cusub
Isbarbardhig: Samsung Galaxy S8 vs iPhone 7 Plus
Falanqaynta isbarbardhiga ah ee aan wajahno Samsung Galaxy S8 iyo iPhone 7 Plus, oo leh astaamo aad u wanaagsan, sicirro, kala duwanaansho iyo isku mid ahaansho.
Shiicada Samsung ka dib Samsung Galaxy Note 7 ka dib khatar kuma gelin doono iibsashada S8 waxaanan dooran lahaa inaan iibsado Samsung Galaxy S7
Samsung Galaxy S8 Plus vs Galaxy S7 Edge, kala duwanaanshaha ugu weyn
Isbarbardhiga u dhexeeya Samsung Galaxy S8 Plus iyo Galaxy S7 Edge halkaasoo aan si faahfaahsan ugu lafa guri doono farqiga u dhexeeya iyo isu ekaanshaha moobiillada.
Galaxy S8 vs Huawei P10, farqiga u dhexeeya laba ka mid ah kuwa ugu fiican Android
Ha moogaanin falanqaynta isbarbardhigga dhammaystiran ee u dhexeeya Samsung Galaxy S8 iyo Huawei P10, oo ah laba ka mid ah kuwa ugu wanaagsan casriga sare.
Samsung Galaxy S8 vs Galaxy S7, isbarbardhig si faahfaahsan
Isbarbardhiga Galaxy S8 vs Galaxy S7 halkaasoo aan ku wajaheyno labada calan ee Samsung. Farqiga iyo isku ekaanshaha u dhexeeya Galaxy S8 iyo Galaxy S7.
Maxaan ugu badalayaa Galaxy S7 Edge-kayga Galaxy S8-ka cusub?
Maqaal ra'yi shaqsiyeed halkaasoo lagu falanqeeyo farqiga u dhexeeya iyo isku ekaanshaha Samsung Galaxy S8 / S8 Plus iyo Galaxy S7 Edge.
Samsung Gear 360, oo leh xallinta 4K iyo 360 fiidiyowyo toos ah
Samsung ayaa soo bandhigtay Samsung Gear 360 cusub, oo ah kaamiro kuu oggolaan doonta inaad duubto 360-fiidiyow oo fiidiyoow ah oo tayo 4K ah iyo baahin toos ah
Samsung DeX Station, waa sida nidaamka desktop-ka ee Galaxy S8 iyo S8 + u shaqeeyo
kani waa Dex Station, oo kaabis u ah Samsung Galaxy S8 iyo S8 + oo u rogaya boosteejooyinkan kumbuyuutarro desktop ah
Samsung Galaxy S8 iyo S8 + ayaa ugu dambeyn la soo saaray. Waxaan ku tuseynaa dhammaan faahfaahinta, qiimaha iyo astaamaha farsamada ee calanka cusub
Samsung Galaxy S8 ayaa ka qaadi doonta 0 ilaa 100% kaliya 20 daqiiqo oo ah S Charge +
Galaxy S Charge + waa tikniyoolajiyad cusub oo degdeg ah oo lagu buuxiyo Galaxy S8 iyo S8 Plus kuwaas oo ka buuxin kara taleefannada gacanta 0 illaa 100% 20 daqiiqo oo keliya.
Toos u soo bandhig # # SamsungGalaxyS8 # GalaxyS8
Laba siyaabood oo loo arko soo bandhigga Samsung Galaxy S8 iyo Samsung Galaxy S8 Plus munaasabadda markay tahay Maarso 29, 2017 magaalada New York.
Sida ugu dhakhsaha badan loo furo kamaradda Galaxy S8
In kasta oo Galaxy S8 aanu lahayn badhanka Guriga ee jirka, haddana wali waxaa jira siyaabo si dhakhso leh loogu furo kamaradda oo aan marka hore la furin xarunta.
Dhamaan macluumaadka rasmiga ah ee Galaxy S8 iyo S8 + ayaa soo ifbaxaya
Kaliya laba maalmood ka dib markii la bilaabay, waxaan horeyba u ogaanay dhammaan faahfaahinta rasmiga ah ee cusub ee Galaxy S8 iyo S8 +, oo ay ku jiraan dhammaan astaamaha farsamada.
Samsung waxay ku siin kartaa dammaanad 3-bilood oo lacag-celin ah Galaxy S8
Samsung Galaxy S8 waxay keeni kartaa dammaanad-celin lacageed oo la kordhiyay illaa 3 bilood iyada oo aan la helin shuruudo gaar ah, sida lagu sheegay warbixin cusub.
Samsung waxay si rasmi ah ugu dhawaaqeysaa Kaaliyaha bixby ee la-tartami doona Siri
Bixby kaaliyaha dalwaddu hadda waa rasmi oo wuxuu la imaan doonaa midka soo socda ee Galaxy S8 iyo S8 Plus, kaas oo yeelan doona badhanka dhinaca u go'an ee firfircoonida.
Galaxy S8 wuxuu ka bilaaban doonaa 799 euros
Xog cusub oo ka socota Evan Blass ayaa na ogeysiin doonta waxa noqon doona midabada iyo qiimaha rasmiga ah ee cusub ee Galaxy S8 iyo s (+ oo ka yimid Samsung
Samsung Galaxy S8 iyo S8 Plus: Qiimaha iyo midabada rasmiga ah
Qiimaha Yurub iyo midabada xiga ee Galaxy S8 iyo S8 Plus horeyba waa loo yaqaan. Qiimaha Dock Dex iyo Gear VR cusub ayaa sidoo kale soo baxay.
Soo dejiso sawirrada Samsung Galaxy S8
Halkan waxaan kaaga tagayaa adiga inaad soo dejiso waraaqaha sawirada ee Samsung Galaxy S8 oo aad si toos ah ugu adeegsato Androids-kaaga.
Galaxy S8 wuxuu noqon doonaa mobilada ugu dhaqsaha badan suuqa
Natiijooyinkii ugu dambeeyay ee tijaabada AnTuTu waxay muujinayaan in Galaxy S8 uu ka fiicnaaday labada iPhone 7 Plus iyo OnePlus 3T.
Galaxy S8 oo leh Exynos 8895 ayaa ka roon nooca Snapdragon 835 ee GeekBench
Samsung Exynos 8895 SoC wuxuu ka fiicnaaday Snapdragon 835 ee heerarka GeekBench. Soo ogow dhibcaha aad heshay.
Kaamirada Galaxy S8 waxay duubi doontaa fiidiyowyo 1000 FPS ah
Kaamirada Galaxy S8 waxay awoodi doontaa inay duubto fiidiyowyo si aad u gaabis ah ugu mahadcelinaya xawaareheeda 1000fps, in ka badan 960fps ee kamaradda Xperia XZ Premium.
Soo bandhigida Galaxy S8 waxaa si toos ah looga arki karaa barnaamijka cusub ee "Samsung Unpacked 2017"
Codsiga cusub ee Samsung Unpacked 2017 waxaa lagala soo bixi karaa Android iyo iOS wuxuuna kuu ogolaanayaa inaad raacdo soo bandhigida Galaxy S8 live.
Samsung ayaa markii ugu horreysay South Korea ka furtay xayeysiinta Galaxy S8
Samsung ayaa markii ugu horreysay xayeysiin ka bilaabaysa Koonfurta S8 ee Koonfurta Kuuriya si ay ula qabsato LG G6
Imaatinka Android Nougat ee Galaxy S6 iyo S6 Edge ayaa dib u dhac ku yimid Boqortooyada Ingiriiska
Siideynta cusbooneysiinta Android Nougat ee Samsung ee Galaxy S6 iyo S6 Edge ayaa dib u dhac ku yimid Boqortooyada Midowday
Samsung Galaxy S8 ayaa dib u dhigi kara soo bandhigideeda illaa dhamaadka Abriil
Warbixin cusub ayaa soo jeedinaysa in Samsung ay dib u dhigeyso soosaarida rasmiga ah ee Galaxy S8 toddobaad gudihiis, laga bilaabo Abriil 21 ilaa 28 Abriil.
Samsung Galaxy Tab S3, dareenka ugu horreeya
Waxaan tijaabinay Samsung Galaxy Tab S3, oo ah kiniin cusub oo lagu soo bandhigay MWC 2017, si aan kuu siino dareenkeena ugu horeeya qalabkan cajiibka ah.
Samsung waxay horeyba u heli laheyd 12 milyan oo Galaxy S8 ah oo diyaar u ah soo bandhigista
Warbixin cusub oo asal ahaan ka soo baxday warshad Samsung ah oo ku taal Vietnam ayaa muujineysa in shirkaddu horey u laheyd ugu yaraan 12 milyan oo Galaxy S8 ah oo iib ah
Ku dhowaad dhammaan qeexitaannada farsamo ee Samsung Galaxy S8 iyo S8 Plus horeyba waa loo yaqaan
Waxaan horeyba u ogaanay ku dhowaad dhammaan qeexitaannada farsamo ee Samsung Galaxy S8 iyo S8 Plus, waanu kuu sheegi doonaa iyaga oo si fiican ugu falanqeyn doona qodobkan.